Hawiye Arrimaha Gudaha, Dir Arrimaha Dibadda, Daarood Gaashaandhigga; Wax Ka Ogoow Qaabka Cusub Ee Uu Damacsan Yahay Ra’iisul Wasaare Kheyrre In Uu Iskugu Shaandheyo Golihiisa Wasiirrada | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Hawiye Arrimaha Gudaha, Dir Arrimaha Dibadda, Daarood Gaashaandhigga; Wax Ka Ogoow Qaabka...
Haddii uu ra’iisul wasaare Kheyrre ku qasbanaado in uu isku shaandheyn sameeyo, waxaa waajib ah in wasiirrada qaar ay xilkooda waayaan, halka kuwa kalena fursad loo siiyo in ay kasoo muuqdaan.
Wasiirrada ay farta ku taagan tahay waxaa kamid ah Yuusuf Garaad Cumar, kaas oo cadaadis dhan walba ah uu kaga imaanayo reerkiisa, oo aan u arkin in uu yahay qof kasoo bixi kara shaqadan, iyo madaxwayne Farmaajo oo aan sidaas ugu hammuun qabin la shaqeynta Yusuf oo ah qof aad u yaqaana xiriirka caalamiga ah.
Sidoo kale wasiirka Arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa ah qof kale oo la filayo in uu waayo xilkiisa, maadaama si shakhsi ah ay iskugu dhaceen ra’iisul wasaaraha kaddib shaqo ka ceyrintii uu kusameeyay Yaxye Ibraahim xoghayihii Joogtada wasaarradda Arrimaha gudaha Soomaaliya.
Dhanka kale waxaa macquul ah in beesha Dir laga qaado wasaarradda Maaliyadda, maadaama hadafkii C/raxmaan Ducaalle Beylle uu ka lahaa wasaarraddaas uu ka gaaray.
Raxanwayn ayaa laga yaabaa in ay helaan wasaarad aan ahayn tan gaashaandhigga, waxaana macquul ah in Fartaag lasoo celiyo oo Maaliyaddiisii lasiiyo, halka Dir na dib loogu celiyo wasaaraddoodii arrimaha Dibadda.
Hawiye gaar ahaan Habar Gidir waxaa laga yaabaa in ayagana ay dib u hantaan wasaaraddoodii arrimaha gudaha, Daarood Majeerteen iyagana waxaa suurta gal ah in ay helaan wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.
Beesha Abgaal oo ku dulman golaha wasiirrada Kheyrre waxaa laga yaabaa in ay sii heystaan wasaaradda warfaafinta, maadaama C/raxmaan Yariisoow oo ah shakhsi hawl kar ah uu wasaaraddaas horumariyay.
Beelaha shanaad ayaa iyagana saammigooda kulahaan doona, waxaana laga yaabaa in ay kusoo baxdo markale Maamo Khadiijo oo ah wasiiradda dhallinyarada iyo Sports-ka Soomaaliya.
Waa fallanqeeyn iyo ka faaloosho uu sameeyay Xuseen Madoobe oo ah agaasimaha Website-ka Shaaciye.com